lungisa uxhumano lwamadivayisi alalelwayo e-bluetooth nezibonisi ezingaxhunyiwe kugesi kuselula ye-windows 10 – Ukusekela Windows 10
lungisa uxhumano lwamadivayisi alalelwayo e-bluetooth nezibonisi ezingaxhunyiwe kugesi kuselula ye-windows 10
Uma ukucindezela inkinobho ethiXhumakusikhungo sesenzo kungayitholi idivayisi yakho yokulalelwayo evumela i-Bluetooth, zama lokhu:
Qiniseka ukuthi idivayisi yokulalelwayo evumela i-Bluetooth ivuliwe nokuthi iyatholakala. Indlela owenza ngayo lokhu iyehluka kuye ngamadivayisi, ngakho hlola ulwazi oluze nedivayisi yakho noma iya kuwebhusayithi yomkhiqizi.
Uma ufuna amadivayisi avumela i-Bluetooth ngaphandle kokulalelwayo, iya ekhasini elithi Amasethingi E-Bluetooth. Iya kokuthi Amasethingi, khetha okuthi Amadivayisi, khetha okuthi I-Bluetooth, khetha idivayisi, khetha okuthi Khipha idivayisi, bese uzama ukubhangqa futhi.
Uma ukucindezela inkinobho ethiXhumakusikhungo sesenzo kungayitholi idivayisi yakho, zama lokhu:
Qiniseka ukuthi isibonisi ofuna ukusisebenzisa sisekela i-Miracast nokuthi sivuliwe. Uma singayisekeli, uzodinga i-adaptha ye-Miracast (ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi “idongeli”) exhunywa embotsheni ye-HDMI.
Previous Previous post: indlela yokusebenzisa ama-alamu ku-windows 10
Next Next post: hlehlisa izibuyekezo ku-windows 10